Karazana fampielezana mailaka 13 voahitsaka tokony hampiharinao | Martech Zone
Karazana fampielezana mailaka 13 voahitsaka tokony hampiharinao
Talata, Oktobra 19, 2021 Alarobia, Oktobra 20, 2021 Douglas Karr
Miara-miasa amin'ireo mpivarotra mailaka marobe aho, gaga foana aho noho ny tsy fisian'ny noforonina mialoha, mahomby fanentanana mailaka nateraka ao anatin'ny kaonty aorian'ny fampiharana. Raha sehatra mamaky an'ity ianao – tokony ho vonona hiditra ao amin'ny rafitrao ireo fanentanana ireo. Raha mpivarotra mailaka ianao, dia tokony hiasa hampiditra karazana mailaka maro karazana araka izay tratry ny herinao mba hampitomboana ny firotsahana, ny fahazoana, ny fitazonana ary ny fampiakarana avo lenta.
Ireo mpivarotra izay tsy mampiasa fampielezan-kevitra mailaka misy ankehitriny dia tsy mahita na inona na inona. Na dia mitombo aza ny mailaka voatazona, dia tsy manararaotra an'io tetika tsotra io ny ankamaroan'ny mpivarotra.
Inona avy ireo mailaka voapaika?
Ny mailaka voatondraka dia mailaka natomboka tamin'ny fitondran-tena, ny mombamomba azy na ny safidiny. Tsy mitovy amin'ny fampielezana hafatra mahazatra sy be mpampiasa izay tanterahina amin'ny daty na ora voatondro alohan'ny marika.
Satria ny fampielezan-kevitra amin'ny mailaka voafitaka dia lasibatra amin'ny fitondran-tena ary ara-potoana raha toa ka manantena azy ireo ny mpanjifa iray, dia mahazo vokatra tsara kokoa izy ireo raha ampitahaina amin'ny raharaham-barotra toy ny fampielezana mailaka mahazatra toy ny taratasim-baovao. Araka ny Blueshift Benchmark Reports amin'ny Triggered Email Marketing:
Amin'ny antsalany, ny mailaka nateraka dia 497% mahomby kokoa noho ny mailaka fipoahana. Ity dia tarihin'i a 468% taha ambony kokoa, ary a 525% ambony kokoa ny tahan'ny fiovam-po.
Amin'ny antsalany, ny fampielezan-kevitra amin'ny mailaka mampiasa fanatsarana fotoana mahaliana 157% mahomby kokoa noho ny mailaka tsy misy fotoana optimized. Izany dia tarihin'ny a 81% taha ambony kokoa, ary a 234% ambony kokoa ny tahan'ny fiovam-po.
Amin'ny antsalany, ny fampielezan-kevitra amin'ny mailaka mampiasa tolo-kevitra dia 116% mahomby kokoa noho ny fampielezan-kevitra andiany tsy misy tolo-kevitra. Ity dia tarihin'i a 22% taha ambony kokoa, ary a 209% ambony kokoa ny tahan'ny fiovam-po.
Nandinika hafatra 14.9 miliara manerana ny mailaka sy ny fampandrenesana ny finday nalefan'ny mpanjifa Blueshift ny Blueshift. Nandinika an'ity angona ity izy ireo mba hahafantarana ny fahasamihafana eo amin'ny metrika fampidirana ifotony, ao anatin'izany ny tahan'ny tsindry sy ny tahan'ny fiovam-po eo amin'ireo karazana fifandraisana isan-karazany. Ny fantsom-pandrefesana azy ireo dia maneho haingam-pandeha maherin'ny 12 ao anatin'izany ny eCommerce, Consumer Finance, Healthcare, Media, Education, sy maro hafa.
Ireo sokajy midadasika amin'ny fampielezana mailaka voafitaka dia tafiditra anatin'ny fe-potoana maharitra, ny fifanakalozana, ny famerenana amin'ny laoniny, ny androm-piainan'ny mpanjifa ary ny fisintomana tena izy. Ny fanentanana manokana natao manokana dia ny:
Tonga soa eto amin'ny mailaka - Ity no fotoana hametrahana ny fifandraisana, ary hanome torolàlana ho an'ny fihetsika tianao hapetraka.
Mailaka an-tsambo - Indraindray ny mpamandrika dia mila a hanoto hanampiana azy ireo hanangana ny kaontiny na hanomboka hampiasa ny sehatra na fivarotanao.
Fanetsehana aloha - Ireo mpamandrika izay nihetsika fa tsy nandray anjara avy hatrany dia mety ho voatarika hanao izany amin'ireo mailaka ireo.
Email fanamafisana indray - Ampidiro indray ireo mpamandrika izay mbola tsy namaly na tsindry tao anatin'ny tsingerin'ny fividiananao.
Mailaka fanamarihana - Ny fampielezan-kevitry ny sarety efa nilaozana dia manohy mitondra ny fiovam-po indrindra ho an'ireo mpivarotra mailaka, indrindra eo amin'ny sehatry ny e-varotra.
Mailaka transactional - Ny hafatry ny serivisy dia fotoana lehibe hampianarana ny vinavinanao sy ny mpanjifanao ary koa hanomezana azy ireo fotoana hafa hifaneraserana. Anisan'izany ny e-rosia, ny fanamafisana ny fividianana, ny baiko miverina, ny fanamafisana ny baiko, ny fanamafisana ny fandefasana ary ny fiverenana na ny famerenana amin'ny laoniny ny mailaka.
Famerenana mailaka - Ny fandefasana fampandrenesana amin'ny mpanjifa rehefa miverina ao anaty tahiry ny lisitra dia fomba iray lehibe hampitomboana ny fiovam-po sy hamerenan'ny mpanjifa ny tranokalanao.
Account Email - Fampandrenesana ho an'ny mpanjifa ny fanovana ny kaontiny, toy ny fanavaozana ny teny miafina, ny fanovana ny mailaka, ny fanovana ny piraofilina sns.
Email amin'ny hetsika manokana - Tsingerintaona nahaterahana, tsingerintaona ary tsangambato manokana izay afaka manome tolotra manokana na fifamofoana.
Mailaka fitondran-tena - Rehefa mifandray ara-batana na nomerika amin'ny marikao ny mpanjifa iray, dia afaka manampy amin'ny fanafainganana ny dia fividianana ny fandefasana hafatra mailaka manokana sy mifandraika amin'izany. Ohatra, raha mijery ny tranokalanao ny mpanjifa iray ary miala ... azonao atao ny manome mailaka fanolorana vokatra izay manome tolotra na fampahalalana fanampiny mba hitarihana azy hiverina.
Mailaka milahatra - Hafatra arahabaina ho an'ireo mpanjifa nahatratra dingana manokana tamin'ny marika nataonao.
Mpandeha amin'ny fotoana tena izy - Toetran'entana miorina amin'ny toetrandro, ny toerana ary ny hetsika hiroso amin'ny lalindalina kokoa amin'ny prospect na mpanjifanao.
Mailaka fanadihadiana - Rehefa vita ny baiko na tetikasa iray dia mandefa mailaka ianao hanontany hoe nanao ahoana ny asan'ny orinasanao dia fomba iray lehibe hanangonana fanehoan-kevitra mahavariana momba ny vokatrao, serivisinao ary ny fizotranao. Ity dia azo arahana ihany koa amin'ny mailaka fandinihana izay mangataka fanamarihana avy amin'ny mpanjifanao hizara amin'ny tranokala sy ny tranonkala hijerena.
Ny fanadihadiana dia manamafy ny mpivarotra fa handray soa amin'ny fampiharana fampielezan-kevitra midadasika kokoa sy mifangaro izany dia manintona fitambarana fika hisarika ny mpanjifa sy hanova fo kokoa. Ireo mpivarotra dia mety hahita ny tenany manombana ny paikadin'ny fampielezan-keviny mandritra ny vanim-potoana fiantsenana any an-tsekoly sy alohan'ny vanim-potoanan'ny fiantsenana fialantsasatra.
Jereo ny Blueshift's Trigger-Based Marketing Benchmark Report
Tags: salan'isa momba ny filaharanamailaka miverina miverinafanamafisana ny mailakamailaka Marketingzava-mitranganandrafitramailaka fampiatoana indrayremarketingmailaka fanoratana indrayavereno mailaka famerenam-bolamailaka fanamafisana ny fandefasanatransactionalmailaka transactionaltriggerfisehoan-javatra mitarikamailaka naterakafampielezana mailaka naterakakarazana mailaka naterakatonga soawelcome emailEnyeny ny marketing amin'ny fiainana andavan'andro